LEGO သည် NINJAGO Seabound ရာသီနောက်တွဲသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်
03 / 10 / 2021 03 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 264 Views စာ0မှတ်ချက် 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mech, 71754 ရေနဂါး, 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း, 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty, ကိုးလ်, ဂျေး, kai, Lego, Lego Ninjago, လွိုက်, မာစတာဝူ, Ninjago, nya, Pixal, ပင်လယ်ကြမ်းပြင်, နောကျတှဲရထား, YouTube ကို, Zane
နောက်တွဲယာဉ်အသစ်တစ်ခုထုတ်ပြီ Lego Ninjago Seabound သည် ၂၀၂၁ နွေရာသီနွေရာသီအတွက်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လာမည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြသသည်။
ပူးတွဲပါဝတ်စုံများကိုလအနည်းငယ်ကြာအောင်ရနိုင်သော်လည်း Seabound အတွက်ပထမအစမ်းကားနောက်ခန်း၏ Ninjagoအမြဲတိုးတက်နေသောဇာတ်လမ်း၊ ရုံတင်ပြသသည် Lego Group မှ။
Teaser ကြိုက်သည် အဆိုပါကျွန်းဗီဒီယိုသည်အလျားနှစ်မိနစ်အောက်သာရှိသော်လည်း၎င်းတို့၏ကာတွန်းပုံစံများကိုပုံစံများဖြင့်ပြသနေဆဲဖြစ်သည်။ မော်ဒယ်အချို့၏အစိတ်အပိုင်းများသည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်သို့မဟုတ်စိတ်အားတက်ကြွစေကြောင်းအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ Merlopia မင်းသား Kalmaar ၏လူကြမ်းအသစ်ကိုလည်း Trailer တွင်ပြသထားသည်။ သူ့မှာနှစ်ခုလုံးသေးသေးလေးတစ်ခုရှိတယ် 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty နှင့် 71754 ရေနဂါး လည်းပဲ 71755 အဆုံးမဲ့ပင်လယ်၏ဘုရားကျောင်း.
ပြန်လာသောဇာတ်ကောင်များတွင်အဓိကအဖွဲ့ဖြစ်သော Nya, Kai, Jay, Cole, Zane, Lloyd နှင့် Master Wu တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပြပွဲ၏ဤရာသီသည်သူမအားသူမ၏စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်၎င်းတို့ထိန်းချုပ်မှုမှရုန်းထွက်ရန်ဖြစ်စေသောအရာကိုရှာဖွေရန်ခရီးစထွက်စဉ်ရေနင်ဂျာကိုအာရုံစိုက်လိမ့်မည်။
Lego Ninjago ခဲ့ အတည်ပြုပြောကြား ၂၀၂၂ ကို ကျော်လွန်၍ ၂၀၂၃ သို့ရှေ့ဆက်ရန်နှင့်နောက်နှစ်မော်ဒယ်များသည်ရှိနေပြီဖြစ်သည် ကောလဟာလသတင်းများအရ အခင်းအကျင်းအတွက်တည်ဆောက်မှုပုံစံသစ်တစ်ခုထည့်သွင်းရန်။
Seabound လှိုင်းများအစုံကိုတရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှယခုကဲ့သို့သေးငယ်သောကမ်းလှမ်းမှုများအပါအ ၀ င်အပြည့်အ ၀ ရရှိနိုင်ပါသည် 71750 လွိုက်ရဲ့ Hydro Mechတလမ်းလုံးပိုကြီးလာသည် 71756 ရေအားလျှပ်စစ် Bounty.
← LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark သည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ကူညီပေးသည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်သင်လျစ်လျူရှုနိုင်သော LEGO အသစ်ခြောက်စုံ →